Ukukhiqizwa kwesinaphi okuthuthukisiwe kwe-Power Ultrasound - Hielscher Ultrasound Technology
I-mustard condiment ikhiqizwa kusuka kufulawa yesinaphi namanzi noma uviniga. Ukuphathwa kwe-Ultrasonic yemastadi kuyindlela esheshayo nephumelelayo yokukhipha i-flavour spectrum ephelele embewu yembewu yesinaphi. Kwinqubo engenamfutha, engenamvubelo, i-ultrasonic cavitation inikezela ukuxuba okungekuhle futhi kukhuphule ukudluliselwa kwesisindo. Ngaleyo ndlela, izithako zokunambitha nezinhlanganisela ze-bioactive ziyakhululwa bese kutholakala ukunambitheka okumnandi kwesinaphi.
Ultrasonic Isinaphi Ukukhiqizwa
I-mustard iyindlela ethandwayo nenempilo eyenziwe embewu yesitshalo sesinaphi (umhlophe / ophuzi lwesinaphi, uSinapis alba; brown / mustard waseNdiya, Brassica juncea; mustard omnyama, uBrassica nigra). Imbewu yesinaphi ephelele, emhlabathini, yesinaphi ephukile noma eyenziwe yahlanganiswa namanzi, uviniga, ujusi kalamula, iwayini elimhlophe, noma obunye utshwala. Usawoti kanye nokukhethwa ezinye izinongo ezinjenge-turmeric, kanye / noma uju kuyangezwa ukuze kudalwe ukunamathisela noma usoso osuka kumbala kusuka kokuphuzi okukhanyayo kuya kofishi obumnyama. Ukunambitheka kwesinaphi kunobubanzi obukhulu futhi kumboza izici ezingenakubalwa kusuka kokunambithekayo kuya kwesipayisi. Ukunambitheka kwesinaphi evamile kutholakala ngokuxuba imbewu yesinaphi namanzi kubangela ukusabela kwamakhemikhali phakathi kwezakhi ezimbili zembewu: i-enzyme myrosinase nama-glucosinolates ahlukahlukene njenge-sinigrin, myrosin, ne-sinalbin. I-enrosme ye-myrosinase iguqula ama-glucosinolates abe amakhompiyutha ahlukahlukene e-isothiocyanate aziwa kakhulu njengamafutha wesinaphi. Ukugxila kwama-glucosinolates ahlukile ezinhlotsheni zezitshalo zesinaphi, kanye nama-isothiocyanate ahlukahlukene akhiqizwayo, enza ukunambitheka okungafani namandla.
Ukucutshungulwa kwesinaphi I-Ultrasonication iyindlela yokwelashwa okwenziwa ngomshini, edala amandla e-shear kanye nokuxuba okuphelele. Yize i-sonication inikeza ukuxubana okukhulu, kuyindlela yokufaka engeyona eyokushisa. Lokhu kusho ukuthi, izinga lokushisa lingalawulwa ngokufanele futhi ukuwohloka okushisa komzimba kwamakhompiyutha athinta ukushisa kuvinjelwe. I-ultrasonic cavitation ikhuthaza ukukhishwa kwezakhi ezihlanganayo ezivela kumaseli ezitshalo, ngoba ngesikhathi sokukhishwa kwe-ultrasonic izindonga zeseli zidilikile. Ukuxutshwa okuncane kwe-ultrasound kuthuthukisa ukudluliselwa ngobuningi nokufinyelela kwe-solvent ngaphakathi kwengqamuzana. Ngaleyo ndlela, isizinda esiphelele samakhompiyutha e-bioactive, isb flavour kanye nezinto ezibalulekile zokudla okunempilo, siyatholakala.
Izinzuzo ze-Ultrasonic Mustard Production
Ukukhipha ukunambitheka okugcwele
Ukukhishwa kwezakhi zomsoco
Ukufakwa okulula noma i-retro-kufanelekile
Ukusebenza Okuphezulu Kwezinqubo Zokudla ze-Ultrasonic
I-Hielscher Ultrasonics inikela ngezinsizakusebenza ze-bench-top nezimboni ezigcwele zezimboni ukuze kusebenze ukudla neziphuzo. Njengendlela yokwelapha, engeyona eyokwelapha, ukucubungula kwe-ultrasonic kuyindlela yokuxuba emnene, enikeza ukuxubeka okusheshayo nokuphelele kwama-solids ku-liquids. I-acoustic cavitation – ekhiqizwa amaza amakhulu e-ultrasound – ifafaza futhi iphule izindonga zeseli zembewu yesinaphi ukuze amakhompiyutha enambitheka akhishwe bese kuthi lapho kutholakala izinsalela zokunambitha zomthengi. Ukuphathwa kwe-Ultrasonic kuvumela ukulawulwa okuqondile kwawo wonke ama-parameter abalulekile wokucubungula njenge-amplitude, izinga lokushisa nokucindezela. Izimo zenqubo emnene zilondolozela amakhompiyutha angenamsoco futhi zivikele ukonakaliswa okushisayo kwezithako ezibalulekile ze-bioactive.
Okokusebenza kwe-Hielscher's ultrasonic kuyinto eqinile kakhulu futhi ethembekile, evumela ukusebenza kwe-24/7 emsebenzini osindayo nasezindaweni ezifunwa kakhulu.
Uyacelwa ukuthi usebenzise ifomu elingezansi ukucela ulwazi olungeziwe mayelana ne-processor ye-ultrasonic yokukhiqiza lwesinaphi nentengo yazo. Sizokujabulela ukuxoxa ngenqubo yakho nawe futhi sikunikeze uhlelo lwe-ultrasonic oluhlangabezana nezidingo zakho!
I-Boscaro V. Boffa L .; Binello A .; Amisano G .; I-Fornasero St .; ICravotto G .; UGallicchio M. (2018): Imiphumela ye-antiproliferative, Proapoptotic, Antioxidant kanye ne-antimicrobial of Sinapis nigra L. ne-Sinapis alba L. Extracts. Amamolekyuli. 2018 Nov; 23 (11): 3004.
UJeremiah Dubie, u-Aaron Stancik, uMatthew Morra, uCaleb Nindo (2013): Isithasiselo se-Antioxidant kusuka kwa-mustard (Brassica juncea) Isidlo seMbewu sisebenzisa i-High ‐ Intensity Ultrasound. Ijenali yeSayensi yokudla, uMqulu 78, Isikhombi 4, Ephreli 2013. k.E542-E548.
I-Szydłowska-Czerniak A., Tułodziecka A., Karlovits G., Szłyk E. (2015): Ukukhishwa kokukhishwa okususwayo kwe-ultrasound kwama-antioxidants wemvelo kusuka ku-mbewu yembewu yesinaphi. J Sci Ukudla Kwezolimo. 2015 Meyi; 95 (7). kk.1445-1453.
Amagatsha omndeni wesinaphi Cruciferae abe izinhlobonhlobo ezahlukahlukene zezinhlobo zesinaphi ezifana nomhlophe / ophuzi lwesinaphi, (Sinapis alba), mustard / brown lwesinaphi (Brassica juncea) kanye no-mustard omnyama (Brassica nigra). Isitshalo sesinaphi ngokwaso sinephunga elibukhali, elishisayo, elinamandla, elenza isivuno sibe sibaluleke kakhulu njengotshani wokukhiqiza i-condiment.
Ukukhiqiza Isinaphi Yesinaphi
Ngemuva kwe-harevsting nokuhlanza, imbewu yesinaphi yomile futhi igcinwe kuze kuqhutshwe ukwenziwa. Lapho kukhiqizwa i-condiment yesinaphi, imbewu ingafakwa ingene ingene njengokwelashwa kwangaphambili. Ukufakwa emanzini noma uviniga kuthambisa imbewu bese kusiza ukususwa okulandelayo kwamahabhu. Ukwehlela imbewu usebenzisa i-mill mill noma i-mill-roll ezintathu kuyisinyathelo esikhulu senqubo ekwakhiweni kwesinaphi. Ngemuva kokugaya imbewu yesinaphi ibe ufulawa wesinaphi, kufafazwa umgubo wesinaphi ukuze uhlukanise amahabhu nama-bran. I-poward yesinaphi emsulwa ihlanganiswa namanzi, uviniga, newayini elimhlophe kanye / noma olunye uketshezi bese luhlanganiswa luxube olunamathiselwe kahle. Esinyathelweni esilandelayo, izinongo, flavour kanye / noma uju kuyangezwa ukwakha iphrofayili yokunambitheka yesinaphi. Ngaphambi kokufaka i-bottling noma ukufaka isinaphi, i-condiment ivutha ukushisa okuthile, lapho ibeka khona isikhathi esithile, okunqunywa sobabili yiresiphi yesinaphi. Amanye amalungiselelo wesinaphi adinga isinyathelo esengeziwe sokuguga, lapho i-condiment iqala khona emikhunjini enkulu yokugcina ukuze kuthuthukise iphrofayili yayo yokunambitheka.
Amakhompiyutha we-Bioactive e-mustard
Isinaphi sicebile ezakhiweni ezi-bioactive, ezaziwa ngezakhiwo zazo.
I-Allyl isothiocyanate ne-4-hydroxybenzyl isothiocyanate yizingxube ze-organosulfur, ezinikeza ukunambitheka kwayo okungenasici, okushisayo nokungenakuphela. Zombili izinto zitholakala ku-horseradish, wasabi, nogalikhi, futhi.
ISulforaphane, phenethyl isothiocyanate, ne-benzyl isothiocyanate zinesibopho sokuzwa nokunambitheka okuncane futhi okungajwayelekile futhi ngaphandle kwesinaphi, kukhona nase-broccoli, amahlumela ama-brussels, i-watercress kanye namabhabhageji. Iyunithi le-sulfoxide ku-sulforaphane linesakhiwo esifanayo samakhemikhali ku-thiol, esenza iphunga le-anyanisi- noma le -galikhi.
Ama-Glucosinolates nama-isothiocyanates ayizindatshana ezimbili ezingeziwe, ezifaka isandla empahleni yesinaphi. I-Glucosinolates luhlobo lwe-composed, eyephuzwa yi-enzyme myrosinase ukuze ikhiqize i-isothiocyanates. Ama-Isothiocyanates angasiza ekunciphiseni ubungozi bomdlavuza ngokuvimbela ukukhula kwamaseli womdlavuza nokwakheka kwamaseli womdlavuza.
ISinigrin uhlobo lwe-glucosinolate ezinhlanyelweni zesinaphi, ezine-anti-cancer, antibacterial, antifungal, antioxidant kanye nezindawo ezilwa nokuvuvukala. Abaphenyi babuye bathola ukuthi i-sinigrin ingahle isekele ukuphulukiswa kwamanxeba.
Amafutha edliwayo wesinaphi acindezelwa ngomshini kusuka ezinhlolweni zesinaphi. Amafutha ama-mustard (i-oyili edliwayo) aqukethe cishe ama-60% ama-monounsaturated fatty acids (42% erucic acid no-12% oleic acid); inamafutha angama-21% we-polyunsaturated (6% i-omega-3 alpha-linolenic acid no-15% i-omega-6 linoleic acid), futhi inamafutha angaba ngu-12%. Ngephuzu lokubhema le-254◦C (489◦F), lingasetshenziselwa ukupheka, ukuthosa, ukuthosa ngokujulile, ukugqoka kwesaladi nososo. Uma uqhathanisa namafutha emifino adliwayo afana no-soya no-sunflower uwoyela, uwoyela wesinaphi yiwo uzinze kakhulu ngenxa yephuzu lakhe eliphakeme lentuthu.
I-Erucic acid iyisakhi esikhulu nesici esingatholakala kakhulu emafutheni embewu omndeni wesinaphi (Cruciferae) naseTropaeolaceae. I-Erucic acid, eyaziwa nangokuthi yi-cis-13-docosenoic acid, ungama-acid angenakuvinjulwa, omisiwe we-monounsaturated onobude obungu-22-carbon chain kanye nesibopho esisodwa esiphindwe kabili esimweni se-omega-9.
Amafutha Esinaphi Abalulekile
Lapho kukhishwa u-oyili obalulekile kusuka lwesinaphi, imbewu yemastadidi ixutshaniswa namanzi, uviniga, noma olunye uketshezi. Ngokuxuba imbewu yesinaphi ibe uketshezi, i-enzyme myrosinase icushiwe, ephenduka i-glucosinolate eyaziwa ngokuthi yi-sinigrin ibe yi-allyl isothiocyanate. Esinyathelweni esilandelayo sokuthaphuka, i-oyela ebaluleke kakhulu ebukhali ihlukaniswa. Amafutha abalulekile wesinaphi abizwa nangokuthi u-oyili ongashintshi wesinaphi futhi uqukethe ngaphezu kwe-92% allyl isothiocyanate. Ngenxa yokuqukethwe kwayo okuphezulu kwe-allyl isothiocyanate, lolu hlobo lwamafutha lwesinaphi luyingozi futhi lumcasula isikhumba nolwelwesi lwama-mucous. Ngamanani amancane kakhulu, kuvame ukusetshenziswa njengokufaka ukunambitheka embonini yokudla.